HAYLOU RS3၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်း။ | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | 23/07/2021 20:00 | reviews
သင်လိုလားသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Androidsis သို့ပြန်သွားပါမည် အသစ်စက်စက် smartwatch ဒီနွေရာသီ။ သင်ကြိုးပမ်းမှု၌ကံကြမ္မာကိုမချန်မထားဘဲအမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုနိုင်သောဝတ်ဆင်နိုင်သောခြေလှမ်းကိုလှမ်းရန်သင်ကြိုးစားနေပါက၎င်းသည်သင့်အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးကိုကြည့်ရှုပါ။ ဟဲလီ RS3။ HAYLOU ၏လက်ပတ်နာရီအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းမှာကမ်းလှမ်းရန်များစွာပါရှိသည်။
စမတ်နာရီတစ်ချိန်လုံးရှိခဲ့ပြီ သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းအတွက်စံပြအဖြည့်။ သတိပေးချက်များ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းနှင့်အခြားအရာများ။ သို့သော်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီးများစွာသောကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရန်မှာအလွန်ခက်ခဲသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ HAYLOU RS3 အကြောင်းပြောပြခြင်းဖြင့်သင့်အတွက်လွယ်ကူစေသည်.
1 HAYLOU RS3၊ သတိပညာ၊
2 HAYLOU RS3 Unboxing
3 HAYLOU RS3 ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်
4 HAYLOU RS3 ထူးခြားချက်များ
5 HAYLOU RS3 ဝိသေသလက္ခဏာများဇယား
6 HAYLOU RS3 ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
HAYLOU RS3၊ သတိပညာ၊
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အရာအားလုံးမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်နည်းပညာပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ။ သို့သော်ယင်းတို့၏ဒီဇိုင်းသည်များစွာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ ဒီနေ့အခြေခံအချက်ဖြစ်လာတယ်။ အထူးသဖြင့်ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုပြောသည့်အခါ၊
ထို့ကြောင့် HAYLOU RS3 ကိုနေရာချခြင်းဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဟန်ဆောင်ကြဘူးကြောင်းစမတ်နာရီတို့တွင်။ တစ်ဦးနှင့်အတူ Fanfare မရှိဘဲရိုးရှင်းသောလိုင်း ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးနိုင်သည်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်စေသည်။ သို့သော်သတိပြုသင့်သည်မှာ၎င်း၏ဒီဇိုင်းမှာမထင်ရှားသော်လည်း၊ ၎င်းသည်လှပသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင် နှင့်အလွန်ကောင်းစွာထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မင်းရှာနေတဲ့စမတ်နာရီ ယခု HAYLOU RS3 ကိုဝယ်ကြလော့ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း။
HAYLOU RS3 Unboxing
ကျွန်ုပ်တို့ HAYLOU RS3 ၏အကွက်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အရာများကိုပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသည်။ ထုံးစံအတိုင်းစမတ်နာရီ၏ unboxing တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည့်အံ့သြစရာအနည်းငယ် (သို့မဟုတ်လုံးဝမရှိပါ) ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အပိုသိုင်းကြိုးထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီအမှုမဟုတ်ပါဘူး။
ငါတို့မှာရှိတယ် နာရီကိုယ်နှိုက်သေးငယ်တဲ့ အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန် ဒီမှာစပိန်ဘာသာစကားမရှိဘူး ပုံမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့တစ် ဦး အားသွင်း cable ကိုသံလိုက် နာရီဘက်ထရီအဘို့။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုပင်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အခြေခံနှင့်ရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။
HAYLOU RS3 ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်
ကျနော်တို့ပြီးသားဗေဒအဆင့်တွင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်မထားဘူးကြောင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကိစ္စများစွာတွင်အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူအမြောက်အများအတွက်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ HAYLOU RS3 ရောက်ရှိလာသည် တစ် ဦး ရော်ဘာသိုင်းကြိုး အနက်နှင့်နာရီတစ်လုံးနှင့်ကိုက်ညီသည် 22 မီလီမီတာစံအကျယ်s ။ တစ်ခုနှင့်ရေတွက်ပါ နူးညံ့သောထိတွေ့မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုအလွယ်တကူလဲလှယ်နိုင်ပါတယ် ပုံမှန် tab ကိုပိတ်ပစ်, HAYLOU ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သိုင်းကြိုးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။
ငါတို့သူ့ကိုကြည့် pantalla၏ဤအမှု၌ ပတ်ပတ်လည်ပုံသဏ္.ာန်။ တန်ဖိုးမဲ့သူများနှင့်ချစ်သူများအတူတူနီးပါးအတိုင်းအတာရှိသော်လည်း၎င်းသည်ဂန္တ ၀ င်ဆန်သောပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့တွေ့တယ် ၆.၅၅ လက်မ AMOLED panel ကို အရာအတွက်ထောင့်ဖြတ် ကျနော်တို့တောက်ပ၏ပြင်းထန်မှုကိုရွေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်အခြားစမ်းသပ်ပြီးသောကိရိယာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့လွဲချော်နေသောအရာ။
ယခုမှာယူပါ ဟဲလီ RS3 လျှော့စျေးနှင့်
သင်၏မျက်နှာပြင်ပြီးပါပြီ 2.5: D ကွေးအနား ၎င်းကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဘောင်နှင့်ချောမွေ့စွာရောစပ်စေသည်။ သူတို့ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိုဆက်ကပ် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ ပြီးတော့ထိတွေ့မှုအတွက်အလွန်သာယာသည်။ ဒါကိုလျစ်လျူမရှုဘဲ resolution ကို ငါတို့ဘာရှာတွေ့မှ 390 x ကို 390 စစp သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအများစုကမ်းလှမ်းထားသည့်အရာထက်များနေသည်
လက်ျာဘက်၌ငါတို့ရှာပါ ခလုတ်နှစ်ခု ထိတွေ့။ မျက်နှာပြင်သည်ထိလွယ်သောထိတွေ့နိုင်သောနည်းပညာရှိသော်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များရှိခြင်းကိုအမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားတတ်သည်။ The အပေါ်ဆုံးခလုတ် ခလုတ်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည် နေအိမ်။ ပြီးတော့ဖန်သားပြင်ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှိပ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်နာရီကိုသူ့ဟာသူဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်ရှည်သောဖိအားဖြင့်။
El ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ display ကိုသက်ဝင်။ ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ တိုက်ရိုက် function ကို configurable ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖိအားပေးတဲ့အခါမှာ activate ခံရဖို့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသို့မဟုတ်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်မဆိုရွေးနိုင်သည်။ ရာသီဥတု၊ အားကစားလှုပ်ရှားမှုများကိုဖွင့်ပါ၊ သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိသည့်စာများကိုစစ်ဆေးပါ။
ထဲမှာ နောက်ဘက် က နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာဒါမှမဟုတ်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောမီတာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်သောဖတ်ခြင်းများကိုရရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းတက်ကြွသောနှလုံးခုန်နှုန်းကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ထက်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုနှုန်းသည်ပုံမှန်ထက် ပို၍ မြင့်မားသည်ဟုဆိုရမည်။ လည်း က အားသွင်းဘို့သံလိုက်တံသင်.
HAYLOU RS3 ထူးခြားချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းသည့်မည်သည့်စမတ်နာရီကဲ့သို့မဆို၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် လက်ကောက်ဝတ်တွင်၊ ယခုအချိန်တွင်ရွေးချယ်ထားသည့်အက်ပ်များ၏မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဒီအဘို့ရှိပါတယ် Bluetooth 5.0 ဆက်သွယ်မှု အဆင်မပြေသောဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲတည်ငြိမ်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ မင်းယုံကြည်စိတ်ချပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဝယ်ပါ ဟဲလီ RS3.
HAYLOU RS3 သည်က 6- ဝင်ရိုး accelerometer နှင့် တိကျသော GPS တစ်ခုချင်းစီကိုလှုပ်ရှားမှု၏တိကျသောဖတ်များကိုအတူတကွလာကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သွားသောအကွာအဝေးများ၊ တည်နေရာနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မီးရှို့နိုင်သည့်ကယ်လိုရီများအရတိကျသောလှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းရှိသည်။ ကျနော်တို့အကြားရွေးချယ်နိုင်သည် 14 အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးခုန်နှုန်းကိုမှန်ကန်စွာဖတ်ရှုခြင်းအပြင်များစွာသောလူတို့မရှိသေးသည့်အပိုတစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ HAYLOU RS3 ကိုတပ်ဆင်ထားသည် ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးအောက်စီဂျင်ရွှဲအပေါ်ဖတ်ပေးခြင်းနိုင်စွမ်း optical အာရုံခံကိရိယာ () အရေးကြီးသည့်အချက်အလက်များ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်၏ပြီးပြည့်စုံသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်တတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
အဆိုပါအပိုင်း ဘက်ထရီ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းသောဒေတာပေးထားပါတယ်။ ငါတို့နှင့်အတူဘက်ထရီတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် 230 mAh တာဝန်ခံ တစ် ဦး ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့တူမထင်ထားဘူးသော သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ HAYLOU RS3 သည်အလွန်ပါးလွှာသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းအင်ကိုထိရောက်မှုမှကျေးဇူးတင်စကား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ကြာရှည် ထ အများဆုံး 15 ရက်.
HAYLOU RS3 အကြောင်းပြောနိုင်သည် ရေနာရီ။ မတူညီသော IP အောင်လက်မှတ်များဖြင့်ရေသို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်နာရီကိုစိုစွတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေနစ်မြုပ်မည်ကိုမကြောက်ရွံ့သင့်ပါ။ အချည်းနှီးရှိသည်မဟုတ်5ATM စက်များအထိခုခံ y ကျနော်တို့က 50 မီတာအထိနစ်မြုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြစ်သောကိုယ်ထည်သည်သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် (သို့) ရေကန်ရှိလျှင်သင်လေ့ကျင့်ထားသောမည်သည့်အားကစားကိုမဆိုထိန်းချုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
HAYLOU RS3 ဝိသေသလက္ခဏာများဇယား
အရွယ် 1.2 လက်မ AMOLED
resolution ကို 390 x ကို 390 dpi
ရေစိုခံ5ATM စက်များ
SpO2 ရွှဲထိန်းချုပ်မှု Si
GPS စနစ် Si
နက်ရှိုင်းသော 50 မီတာ
ခုခံခြင်း5ATM စက်များ
ဘက်ထရီ လီသီယမ် ၂၃၀ mAh
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ၁၅ ရက်အထိ
ရှုထောင့် 50.5 43.4 12.5 မီလီမီတာ
စြေး 59.50 €
ဝယ်ယူ link ကို ဟဲလီ RS3
HAYLOU RS3 ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
resolution ကို မျက်နှာပြင်။
ဘက်ထရီ GPS နှင့်အတူအလွန်တိုတောင်းသည်။
ပုံရသည် ပျက်စီးလွယ်တယ် ရေတံခွန်မီ။
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: 23 က de Julio က de 2021
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: 23 က de Julio က de 2021
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » HAYLOU RS3၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်း
ဒီလှည့်ကွက် ၉ ခုနဲ့အတူသင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်ဆောင်နည်း